China SSS-130-9A / B Ogologo Ndụ Life Diamond Hụrụ Agụba maka Granite emepụta na suppliers | Ngwaọrụ Shuangshi
SSS-130-9A / B Ogologo Ndụ Ndụ Diamond Hụrụ Agụba maka Granite
Soplaya / wholesaler / wholesaler nke 5 ″ (130 mm) diamond ịcha pupụtara / okirikiri hụrụ pupụtara maka mgbidi uzo / konkiri
Net arọ (g) 140g
Ọnụ ọgụgụ nke Ezé 9T
Ezigbo Elu 15mm
Agụba dayameta 5 "(130mm)
Disc Bore Size 4/5 "(22mm)
Ọkpụrụkpụ Agụba 2.0-2.2mm
Ọnọdụ tingcha Akọrọ / Wet
5 "(130 mm) diamond hụrụ ahịhịa maka mgbidi mgbidi na granite. Chepụta njikọ nke akụkụ ahụ dị ka ịdị ike nkume gị dị iche iche, abrasiveness, igwe, oke iji weta ọnwụ kachasị na mmepụta kachasị.
Ọ bụ mgbakwunye nke oghere quad na-eme ka agụba a dị egwu karịa. Ekekọrịta Diamond Blade na-enye arụmọrụ kacha mma na ogologo ndụ maka ọrụ gị niile. Jiri akwa agụba ahịhịa maka ngwa ngwa ma na-eme ihe ike na ihe, brik, ngọngọ, nkume, na stucco.
Iji agụba na-aga n'ihu na iwepụ ma ọ bụ nkwụnye quad na-enye gị ohere ịmecha ma banye ohere dị ka sink sink.
Usoro nkwakọ ngwaahịa anyị bụ nkwakọ ngwaahịa plastik na nchịkọta akwụkwọ; Nke a bụ ụzọ kachasị mfe na ụzọ akụ na ụba iji kwakọ ngwaahịa. Ozugbo ị nyere iwu, anyị ga-ebuba ya ozugbo enwere ike. Anyị na-enyekwa mgbe a na-ere ahịa. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla metụtara ngwaahịa a, biko kpọtụrụ anyị n'oge
Mụbara ọrụ oge:
Diamond agụba maka n'akuku grinder na-wuru nke mere na n'oge ọrụ ọ heats elu nwayọọ nwayọọ nke na-eduga na-abawanye na-arụ ọrụ oge.
Diamond n'akuku grinder agụba GRAFF nwere ike onwe-nkọ site ihicha diamond grits n'oge ọrụ. Iji mee ka ọ dị nkọ ọ dị mkpa iji mee ka ọnụọgụ abụọ ma ọ bụ atọ na silicon ma ọ bụ nkume abrasive.
AKW SOLKWỌ ​​DID AKW :KWỌ: A na-eji nkume agụba maka granite na okwute mee ihe maka ịkpụchasị ihe eji eme ihe site na iji obere nha eghe egweri ya na 7/8 ”Arbor. Nke a hụrụ agụba nwere okpokoro nke ígwè dị mma nke na-eme ka nrụgide dị elu n'oge ọrụ.
Anyị ụlọ ọrụ nwere 5 nnukwu tent na-amị igwe na anyị factory, na anyị na-aga ịgbatị anyị mmepụta ọzọ. Ugbu a, anyị nwere ike ịmepụta 10000pcs kwa ụbọchị, ma ọ bụrụ na iwu gị buru ibu, anyị nwere ike ịhazi ya na mbụ.
Elu àgwà carbon bughi ígwè matriks
65 manganese ígwè
Agbata ma ọ bụ karịa ogo
Arụrụ ụlọ alloy ntụ ntụ.
Mkpụrụ ọka diamond nke mma nkwọ n'onwe ya dị njọ. Brik brik,
Steel ihe mgbidi uzo
All iche iche granite
Other keadighi rarii
Grunular hard kenkuwa na-abụghị dara ihe.
Ngwakọta Ngwá Ọrụ:
Stone ọnwụ igwe (marble igwe)
Bench ọnwụ igwe
Wall oghere igwe bụ isi
Nke gara aga: SSQ-170-12HA / B Ihe Mbelata Diamond Disc Na-egbutu ngwa ngwa
Osote: SSS-156-12A / B / C Diamond Saw Blade Cutting Disc for Marble Ngidi
SSS-170-12HA / B / C Longer Iji Ndụ Turbo Segmen ...
SSQ-125-9A / B Time Saving Granite Diamond Hụrụ B ...
SSQ-156-12A / B nkewa Diamond Cutting Agụba / D ...
SSQ-114-10HA / HB Oblique Nchekwa Diamond Cu ...
SSQ-114-8HA / B / C Ezé Nchedo Hụrụ UM UBARA ...
SSQ-114-66A Extended Life okirikiri Hụrụ pupụtara f ...